Tsy haneno ny iPhone-ko! Ity ny tena antony. - Iphone
maninona ny findaiko no miverina mitokana
fanampiana any Etazonia ho an'ny reny tokan-tena
tsy mandeha ny mpiantso ahy
iTunes tsy mahafantatra telefaona
Tsy miantso ny iPhone-ko! Ity ny tena antony.
Sary ity: miandry antso an-tariby manan-danja ianao. Nojerenao indroa ny iPhoneo mba hahazoana antoka fa efa mandeha ny peratra ary navadibadikao hatrany ny volonao. Rehefa maneno ny telefaona dia ianao mandeha maheno azy. 5 minitra lasa dia mijery ny iPhone-nao ianao, vao hahalala tsy nahatratra ny antso manan-danja ianao! Aza manipy ny telefaoninao amin'ny saka. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho NAHOANA tsy haneno ny iPhoneo ary hasehoko anao Izay indrindra ny fomba fanamboarana azy.
Fanavaozana: Raha manana iPhone 7 ianao, dia hiasa ho anao ity lahatsoratra ity - saingy mety te hijery ilay lahatsoratra vaovao nantsoina hoe ianao Tsy miantso ny iPhone 7-ko ho an'ny fitsangatsanganana manokana an'ny iPhone 7. Raha tsy izany, mamaky hatrany!
Nanentana ahy i Martha Aron hanoratra ity lahatsoratra ity rehefa nanontany izy hoe: “Ny iPhone-ko tsy miantso amin'ny antso rehetra, malahelo be amin'ny antso sy ny SMS aho noho io. Afaka manampy ahy ve ianao?' Martha, eto aho hanampy anao sy ny olon-drehetra izay tsy nahatratra antso sy hafatra an-tariby satria tsy maneno ny iPhone-ny.
Fantatrao angamba izany, fa jereo ihany…
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia mety ho efa fantatrao fa haneno ny iPhone dia tsy maintsy apetraka haneno ny switch / Miadana eo amin'ny sisin'ny iPhone.
Raha misintona mankany amin'ny efijery ny switch, dia mirehitra ny peratra iPhone anao. Raha atosika mankany ambadiky ny iPhone ny switch, dia mangina ny iPhone-nao ary ho hitanao ny tsipika volomboasary kely eo akaikin'ny switch. Ho hitanao eo amin'ny fampisehoana iPhone ihany koa ny kisary mpandahateny rehefa soloinao ny switch.
Raha vantany vao azonao antoka fa efa voatendry hitendry ny peratra Ring / Silent, dia alao antoka fa voahodina ny telefaona iPhone hahafahanao maheno ny peratra iPhone anao rehefa mahazo antso ianao. Azonao atao ny mamadika ny feon-telefaona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra miakatra eo amin'ny sisin'ny iPhone.
fanairana tsy mandeha amin'ny iphone
Azonao atao ihany koa ny mamadika ny volan'ny ringer amin'ny fanokafana Fikirana -> Feo & Haptics . Tetezo ao ambany ilay mpikorisa Ringer Ary Fanairana amin'ny ankavanana mba hampisondrotra ny volan'ny ringer amin'ny iPhone. Arakaraka ny ahatosizanao ny mpikorisa miankavanana dia ho mafy ny feon'ilay mpiantso.
Raha tsy misy feo ny iPhone-nao mihitsy , ny lahatsoratro momba inona no hatao rehefa tsy miasa intsony ny mpandahateny iPhone hasehoko anao ny fomba fanamboarana izany olana izany. Raha efa vitanao izany rehetra izany dia izao no antony tsy am-peo ny iPhone-nao:
Ity ny fanamboarana: vonoy, aza manakorontana!
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny antony tsy iantsoan'ny iPhone antso an-tariby dia ny tsy nampandehanan'ny mpampiasa tsy nahy ny endri-javatra Do Not Disturb amin'ny Settings. Aza manelingelina ny antso, fampandrenesana ary fampandrenesana amin'ny iPhone-nao.
Ny fomba tsotra indrindra ilazana raha velomina ny Do Not Disturb dia ny mijery eo amin'ny zorony ankavanana ambony amin'ny iPhone, eo ankavanan'ny sary famantarana bateria fotsiny. Raha alefa ny Do Not Disturb dia hahita sary masina kely ianao eo.
Raha te hilentika lalindalina kokoa amin'ny Do Not Disturb ianao ary hametraka fandaharam-potoana mandeha ho azy, ohatra, mitodiha any Fikirana -> Aza manelingelina hahita ny safidy rehetra azonao atao.
Hatramin'ny namoahan'ny Apple ny iOS 7 dia mora ny mamono sy mamono ny Do Not Disturb. Swipe miakatra avy eo ambanin'ny efijery iPhone anao hanokafana ny Control Center. Tsindrio ny kisary amin'ny volana hampandehanana na vonoy ny Aza Manelingelina. Dia izay!
Mety miovaova izany amin'ny kinova iOS samihafa. Raha manana iPhone X na vaovao ianao dia sokafy ny Center Control amin'ny alàlan'ny fihoarana avy eo amin'ny zoro ankavanana ambony amin'ny efijery an-trano.
Azonao atao ihany koa ny mamono ny Aza manelingelina amin'ny alàlan'ny Fikirana -> Aza manelingelina ary vonoy eo akaikiny ny switch Aza elingelenina . Ho fantatrao fa tsy mandeha ny Disturb rehefa fotsy ny switch.
Vonoy ny “Mangina ireo mpiantso tsy fantatra”
Ny antony iray mahatonga anao manana olana amin'ny telefaona iPhone dia mety satria ny anao sakano ireo mpiantso tsy fantatra mandeha ny endri-javatra. Ity endri-javatra ity dia tsara amin'ny fampijanonana ireo telemarketer sy robocalls amin'ny lalan'izy ireo, saingy indrisy fa manivana olona sasany izay tena tianao horesahina ihany koa.
Mba hamonoana ity dia mankanesa any Fikirana -> Telefaona ary avy eo vonoina Mangina ireo mpiantso tsy fantatra. Raha vantany vao vitanao izany dia tokony ho afaka maneno indray ny telefaoninao rehefa manandrana miantso anao ny olona iray izay tsy ao anaty fifandraisana aminao.
Ahoana raha ny iPhone-ko Na izany aza Tsy hiantso ve?
Nahazo fanehoan-kevitra roa avy amin'ny mpamaky aho izay nandray ny tolo-kevitra rehetra ary mbola tsy maneno ireo iPhones. Raha vitanao hatreto ary tsy maneno ny iPhone-nao dia misy vintana lehibe mety hanananao olana amin'ny fitaovana.
Matetika, rehefa miditra ao amin'ny iray amin'ireo seranana ny gunk na ranoka (toy ny jack headphone na mpampitohy kilat / dock), ny iPhone-nao mihevi-tena ho misy zavatra tafiditra ao, raha ny marina tsy misy. Ny lahatsoratro momba ny fomba fanamboarana iPhone tafahitsoka ao anaty maody an-doha manazava ny antony hitrangan'izany sy ny fomba hamahana ilay olana.
olana amin'ny gmail amin'ny iphone
Fotoana lava io, fa azonao atao ny maka borosy antistatika (na borosy nify mbola tsy nampiasanao hatrizay) ary andramo esory ny basim-borona avy amin'ny jack headphone anao na seranan-tsambo mpampitohy kilat / dock. Ny borosy antistatika dia manampy amin'ny fanadiovana ny karazana elektronika isan-karazany, ary azonao atao izany makà fonosana 3 amin'ny Amazon latsaky ny $ 5.
Raha mahomby ianao dia tokony hamaha ny olana ny tenany. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny fotoana dia efa natao ny fahavoazana. Misy zavatra fohy ao anatiny ao amin'ny iPhone anao, noho izany ny vahaolana tokana dia ny fitsidihana ny Apple Store anao eo an-toerana na ny fampiasana ireo safidy mailaka ao amin'ny Tranonkala mpanohana an'i Apple hamboarina ny iPhone-nao.
Mety lafo ny fanamboarana Apple Store. Raha mitady safidy tsy lafo ianao, dia mamporisika anao aho hanin-kotrana , orinasa mpanamboatra izay handefa teknisianina voamarina ho anao iza no afaka mifanena aminao ary manamboatra ny iPhone ao anatin'ny adiny iray.
Izao koa mety fotoana mety hanatsarana ny iPhone. Mety ho lafo ny fanamboarana, indrindra raha mihoatra ny zavatra iray no tsy mety amin'ny iPhone-nao. Raha tokony handany dolara an-jatony amin'ny fanamboarana ianao dia afaka mampiasa izany vola izany hividianana telefaona vaovao. Zahao UpPhone's fitaovana fampitahana finday hahitana fifanarahana be amin'ny iPhone vaovao!
Do Not Disturb dia iray amin'ireo endri-javatra tsara azo ampiasaina raha hainao ny mampiasa azy, fa mety hahasosotra tokoa raha tsy tianao. Ho an'i Martha sy ny olon-kafa rehetra izay tsy nahita antso lehibe na nikiakiaka hoe: 'Tsy haneno ny iPhone-ko!' amin'ny mpandeha tsy manan-tsiny, manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia hamaha anao ny olanao mangina iPhone. Raha manana fanontaniana fanarahana na fanandramana hafa hizara ianao dia apetraho ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany. Manantena valiny avy any aminao!